IXESHA LOMONI 3 UMHLA WOKUKHUTSHWA | LILIPHI IXESHA KWINETFLIX? -RADIO TIMES - UMDLALO WEQONGA
Liza nini ixesha loMoni 3 kwiNetflix UK? Ixesha liyehla, lilahle, itreyila kunye neendaba zamva nje
Akukho kunqongophala kokukhethwa xa kufikwa kumdlalo wolwaphulo-mthetho kwiNetflix, kwaye enye yeendawo zokuma ekukhetheni iqonga nguSinner - uthotho lwe-anthology emnyama edlala phambili noBill Pullman kwindima ekhokelayo njengomcuphi wamapolisa uHarry Ambrose.
Kula manqaku mabini okuqala, uHarry wayenikwe uxanduva lokusombulula iimfihlelo ezimbini ezahlukileyo, uPullman wajoyina iqela lobuso obudumileyo kubandakanya uJessica Biel (Limetown) kuthotho lokuqala kunye noCarrie Coon (Iintsalela) kwisizini yesibini.
Ngoku siyazi ukuba uHarry uza kujongana nezinye iimfihlelo ezimbini nangaphezulu - ixesha lesithathu lisendleleni kwaye eyesine sele iqinisekisiwe - nantsi into esiyaziyo malunga nomdyarho wesithathu ukuza kuthi ga ngoku…
Iza nini i-Sinner isizini 3 kwiNetflix?
IQINISEKILE: Ixesha lesithathu loMoni liya kuthi ekugqibeleni lifike kwiNetflix UK naseIreland NgoLwesihlanu umhla we-19 kuJuni ngentsimbi yesi-8 kusasa.
Olunye uhlaziyo lukaJuni: Umoni s3 uza kwiNetflix UK / IE nge-19 kaJuni.
-Netflix UK naseIreland (@NetflixUK) Ngomhla we-18, 2020
Uluhlu olutsha olwaqala ukubhengezwa nge-6 kaFebruwari kwiNethiwekhi yase-USA eMntla Melika, oko kuthetha ukuba abalandeli kuye kwafuneka bachithe iinyanga ezimbalwa ezidlulileyo bebaleka izinto ezonakalisayo kubahlobo bethu ngaphesheya kwechibi.
Ngubani okwi-cast of the Sinner season 3?
UBill Pullman uphinda indima yakhe kumaxesha amabini okuqala njengomphenyi wamapolisa uHarry Ambrose, nge UMat Bomer (Ikholeji emhlophe) ukujoyina umboniso njengoJamie Burns, utata olindelweyo ofumana ingozi yemoto ebulala umhlobo wakhe wakudala wasekholejini.
Amalungu amatsha abalingisi kule sizini abandakanya UChris Messina (Harley Quinn: Iintaka zexhoba) njengomhlobo kaJamie ongonwabanga osuka kwikholeji uNick Haas, UJessica Hecht (Ukophula okubi) njengoSonya Barzel, igcisa elihlala kufutshane nalapho kwenzeke khona ingozi, UParisa Fitz-Henley (Luke Cage) njengomfazi okhulelweyo kaJamie uLeela Burns, kwaye UEddie Martinez (Narcos: Mexico) njengoMcuphi uVic Soto.
Ithetha ngantoni ixesha loMoni 3?
Ixesha lesithathu loMoni livula ngo-Detective Ambrose abizelwe kwingozi yemoto ebonakala ngathi iyindawo evulekileyo nevaliweyo; Umqhubi ubhengezwe njengofileyo kwindawo yesigameko kwaye umkhweli osaphilayo ubanga ukuba yayiyingozi embi.
Kodwa emva kokubuza ubungqina, u-Ambrose kungekudala ufunda ukuba kuninzi kakhulu kweli bali kunokuhlangana nelihlo kwaye aqala ukutyhila into eyenzekileyo kanye ngala mini intle kwaye ngoba.
Ukuphononongwa kwesizini 3: Ngaba abagxeki bayayithanda?
Ewe, ixesha lesithathu loMoni litsale uphononongo olomeleleyo kubagxeki baseMelika.
INew York Post Bayibiza ngokuba yimfihlakalo ebandakanyekayo, bencoma ukusebenza kukaPullman noBomer kwaye beqaphela ukuba uninzi lwempumelelo yebali leli xesha linento yokwenza nokuphosa okukuko.
IndieWire wayenamagama amnandi kuBomer kunye nenqaku lomboniso elikhwankqisayo ngumqokeleli uRonit Kirchman, esithi: Imitya yakhe iyangcangcazela phakathi kokudakumba kunye nesililo, ifunxwe ngumsi we-elektroniki onokuphupha okanye woyike. Yenza ibhaltshi enomdla yengqondo iyonke.
Idityaniswe nengxubakaxaka yangaphakathi eqhubekayo ekubonisweni kobuso babalinganiswa kwiziko lomboniso, amanqaku ayaqhubeka nokuba yinxalenye esisiseko yento eyenza ukutyhala kunye nokutsala uMoni kube sisenzo sokunyanzelisa sokulinganisa.
Kubathandi bomdlalo weqonga (kunye nabathandi bomdlalo wedrama ngokukodwa), uMoni uhlala eyi-anthology ehlala iphantsi ehlala ihambisa ityala elomeleleyo ngokuphoswa kuyo, utshilo Cola imagazini . Yinto iwotshi elungileyo ukuzinkcinkca ngotywala, kodwa uphononongo olufanelekileyo lweveki ngokunjalo.
Ngaba kukho itreyila yeXesha leSoni 3?
Ewe ungayibukela i-teaser eyoyikisayo kule sizini intsha ingezantsi…
Ixesha lomoni 1 kunye nexesha lesibini lokuphinda ubuye
Ixesha ngalinye loMoni unokhokelo olwahlukileyo lweendwendwe, obomi babo buba ngokungahambelaniyo nePullman kaHarry Ambrose.
Ngexesha lokuqala, u-Ambrose ungene kwixesha elidlulileyo lomfazi okhathazekileyo (uJessica Biel) ukumisela ukuba kutheni wahlaba umntu ukuba abulale kwaye engenankumbulo yokwenza ulwaphulo-mthetho.
Kwixesha lesibini, u-Ambrose ubuyile kwidolophu yakhe ukuya kuphanda ukubulawa kwesibini esasinonyana wabo oneminyaka eli-11 ubudala. Ngokuhamba kophando, udibana noVera (Fargo ’s Carrie Coon), onokuthi abambe iimpendulo azifunayo.
Ngaba uthotho loMoni 3 luza kuba lolokugqibela?
Iindaba ezimnandi zabalandeli- umboniso uza kubuya ubuncinci ukubaleka emva kothotho lwesithathu.
Njengoko kuchaziwe ngu Umgca weTV , UChris McCumber, umongameli we-USA Network uqinisekisile ukuba uthotho lwesine lwalugunyazisiwe, esithi, Umoni ubetheke kubaphulaphuli ngesayinitsha yayo ethi 'whydunnit'.
Kwixesha lesi-4, sonwabile ukumba nzulu kwi-psyche yomlingiswa othandekayo ka-Bill Pullman u-Detective Ambrose, ngelixa sisazisa abaphulaphuli bethu kwimfihlakalo, entsha ngokupheleleyo.
Akukho umhla osemthethweni wokuba singabona uthotho lwesine okwangoku - kodwa kulindeleke ukuba lubekho ngo-2021. Siza kukugcina uhlaziywa ngeendaba ngakumbi nangexesha esizifumana ngalo, kubandakanya nobuphi ubuso obudumileyo obunokuzibandakanya nesamente ngokuzayo…
Amaxesha amabini okuqala eSoni ahamba ngoku kwiNetflix UK. Ukuba ujonge ngaphezulu ukubukela, jonga isikhokelo sethu seTV.
ukubona 555 kuyo yonke indawo
ukubona 6666 intsingiselo
Idayimani yepokemon kunye neperile yenza kwakhona ngo-2021
ingaba i-liverpool iqalisa nini ngokuhlwanje
ukwenza isikrufu esihlutyiweyo